အိမ်ထောင်သည် အမျိုးသားက တခြားမိန်းမနဲ့ ချစ်မိတဲ့အခါ ဘာလုပ်မလဲ။ စတိုင်လ်ကျသော အမျိုးသားများ
Alicia tomero | 22/11/2021 18:10 | စုံတွဲနှင့်လိင်
အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်မှုတွေ ရှိနေပြီး အိမ်ထောင်သည်တွေမှာတော့ ထင်တာထက် ပိုအဖြစ်များပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ မင်းကိုယ်မင်း သေချာပေါက် ဘယ်မှာတွေ့မလဲ။ အိမ်ထောင်သည်နှင့် သင် ဆက်ဆံရေးရှိနေသည်။ ဒါပေမယ့် သံသယတွေက အဆုံးမသတ်ပါဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ငါတို့က အဲဒီလူကို အရမ်းကြိုက်ရင် သူဘယ်လိုပြုမူတယ်ဆိုတာ သိချင်လိမ့်မယ်၊ ချစ်မိသောအခါ၊
ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးလာရတဲ့အချက်က ငါတို့ကို အထင်သေးစေတယ်။ သူတို့အိမ်ထောင်ရေးက အကျေနပ်ဆုံးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ဘဝသည် အလွန်ပုံမှန်မဟုတ်၊ လျစ်လျူရှုပြီး ငြီးငွေ့စရာပင်ဖြစ်ရမည်။ သို့ပေမယ့် ဘယ်အရာကမှ မင်းရဲ့သဘောထားကို မမျှတပါဘူး၊ တော်တော်များများက သူတို့လုပ်နေတာကို စိတ်မ၀င်စားဘူး။
1 အိမ်ထောင်ရှင်ယောက်ျားက တခြားမိန်းမနဲ့ ချစ်မိတဲ့အခါ ဘယ်လိုမျိုးလဲ။
2 ယောက်ျားက သူ့ချစ်သူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျရင် ဘယ်လိုလဲ။
3 ချစ်သူရှိပြီးသော အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက် အကြံဉာဏ်
အိမ်ထောင်ရှင်ယောက်ျားက တခြားမိန်းမနဲ့ ချစ်မိတဲ့အခါ ဘယ်လိုမျိုးလဲ။
အိမ်ထောင်သည်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အဆင့်အတန်းနဲ့ ဆက်ဆံရေးကို အရမ်းတန်ဖိုးထားတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုမချမီ။ လုပ်ဆောင်ရမည့်အစီအမံများသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် တရားမ၀င်သော်လည်း ဖောက်ပြန်ခြင်းသို့ရောက်ပုံအပေါ် အာရုံမစိုက်မိသည်မှာ သေချာပါသည်။
သူတို့ရဲ့ လက်ရှိဆက်ဆံရေးက ဘယ်လောက်ဆိုးလဲလို့ပဲ တွေးပြီး အဲဒါကို ချိန်ဆလို့မရပါဘူး။ သင် လွဲချော်မည့်အရာ။ မျှော်လင့်ချက်ရှိသေးရင် ဒါမှမဟုတ် တစ်ခုခု တိုးတက်လာနိုင်ရင် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဆက်ဆံရေးက ဘယ်လိုကောင်းလာမလဲဆိုတာကို မအပ်ဒိတ်မလုပ်တတ်ကြပါဘူး။ ပျင်းရိခြင်းသည် ၎င်းတို့၏အချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့တွင် ရှိသည်များကိုသာ သိရှိနိုင်သည်။ တကယ်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါ၊
သစ္စာမရှိသူသည် တန်းတူရည်တူရှိနိုင်သည်။ တခြားမိန်းမနဲ့ ချစ်မိသွားတယ်။ သူ့မိသားစုဘဝတွင် တစ်စတစ်စစိတ်မဝင်စားမှုစတင်ပြီး လောင်ကျွမ်းသွားသော မီးတောက်ကို မရှင်သန်နိုင်တော့သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ အဲဒီအိမ်ထောင်ရှင် သူ့ခေါင်းကို တခြားနေရာမှာ ထားဖို့ စတယ်။သူ့ဝတ္တရားအားလုံးကို တစ်ကြိမ်တည်း မကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ပိုလေးနက်လာသည်။ သူက ပိုဝေးပြီး ကိစ္စတော်တော်များများမှာ သူရှိတယ်။ သူ့ခေါင်းထဲမှာ တခြားဆက်ဆံရေးအကြောင်း စဉ်းစားနေတယ်။
သူ့မိန်းမနဲ့ ဆက်ဆံရေး ပြင်းထန်မှု ကျဆင်းသွားသည်။. သူမနှင့် အခိုက်အတန့်များကို ဝေမျှရန် စိတ်အားထက်သန်ခြင်းမရှိတော့ဘဲ သူမ၏ပြဿနာများ သို့မဟုတ် စိတ်ခံစားချက်များကို နားထောင်ရန်ပင် စိတ်မဝင်စားတော့ပေ။ သူ့ချစ်သူနဲ့ အတူရှိစဉ်မှာ ပျောက်သွားတဲ့အတွက် အိမ်မှာ ပိုက်ဆံက ပုံမှန်မလာဘူး။
ယောက်ျားက သူ့ချစ်သူနဲ့ အိမ်ထောင်ကျရင် ဘယ်လိုလဲ။
အိမ်ထောင်ရှင်များ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးသည် အိမ်တွင် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ နှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်ရဲ့ ပေါ့လျော့မှု။ ဇနီးသည်က သူ့ကိုယ်သူ လျစ်လျူရှုလာတဲ့အခါ ယောက်ျားက တခြားသူကို ကြည့်တဲ့သူလို့ ထင်လာနိုင်တယ်။ ဤအချက်ကိုအခြေခံ၍ ဤအချက်သည် များစွာကွဲပြားနိုင်သည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်ထို့ကြောင့် လူသည် အိမ်အပြင်ဘက်တွင် မတွေ့ရသည့်အရာအတွက် အိမ်အပြင်ဘက်ကြည့်လျှင် ပိုပျော်သည်။
အိမ်ထောင်ရှင် ယောက်ျားမှာ အငယ်အနှောင်းရှိရင် လိုချင်မှာ သေချာတယ်။ ငါသူမနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှအချိန်ပေးပါ။. မင်းရဲ့လက်ရှိလက်တွဲဖော်ဆီက မင်းလိုချင်တာမှန်သမျှ အဲဒီမိန်းမထဲမှာ မင်းမြင်နေရတယ်။ ၎င်းတို့သည် ရိုးရိုးရှင်းရှင်း စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာများနှင့် ပျော်ရွှင်စရာအသစ်များဖြစ်ကြသည်၊ သင့်အိမ်တွင် ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့သော အရာများ ဖြစ်နိုင်သည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိတယ်ဆိုတာ သိရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ မတွေ့ခဲ့ရဘဲ ရှာဖွေနေတဲ့ အရည်အချင်းတွေနဲ့ တန်ဖိုးထားမှုတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ သင်သည် အမြဲတမ်း သင့်ချစ်သူနှင့် အကြောင်းကို ပိုမိုသိချင်နေလိမ့်မည်။ အချစ်တွေအားလုံးကို ပေးလိမ့်မယ်။ အိမ်မှာ ချို့တဲ့တယ်။
သူ့ချစ်သူကို အမြဲသတိထားပါ။မင်းဘယ်လိုနေလဲ၊ မင်းဘာလုပ်နေလဲဆိုတာ မင်းစိတ်ထဲရှိတာ။ သူသည် သူ့ပုံသဏ္ဍာန်ကို ဂရုစိုက်ပြီး သူမနှင့်တွေ့ဆုံသောအခါတွင် သူကိုယ်တိုင် သတို့သားလောင်းကို နှစ်သက်သည်။ နောက်ထပ်ဘာတွေလဲ၊ စိတ်လှုပ်ရှားပြီး စိတ်လှုပ်ရှားလာသည်။ ပေါင်းမိသောအခါ၊
အာရုံကြောတွေရဲ့ အကြောင်းရင်းက ဘာလဲ။ အကြောင်းရင်းများစွာရှိနိုင်သည်။ သင့်ချစ်သူကိုတွေ့တဲ့အခါ ရိုးရှင်းတဲ့ခံစားချက်က သင့်ကို စိတ်လှုပ်ရှားစေတာဖြစ်နိုင်ပေမယ့် ဒါဟာ သင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြီး တားမြစ်ပိတ်ပင်ခံရခြင်းက သင့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေတာကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ချစ်သူရှိပြီးသော အိမ်ထောင်ရှင်များအတွက် အကြံဉာဏ်
ခိုင်မာပြီး တရားဝင်တဲ့ ခြေလှမ်းကို မလှမ်းခင်မှာ လူတစ်ယောက်ဟာ ပြတ်သားတဲ့ အကြံဥာဏ်တွေ ရှိရမယ်။ ဘယ်လိုခံစားရလဲ၊ ဘယ်လိုအခြေအနေလဲ။. သူ့အတွက်ကတော့ ရေရှည်မှာ မမြင်နိုင်ရင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့ လွယ်မှာမဟုတ်ဘူး၊ သူခံစားရတဲ့ အချစ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။
ဆက်ဆံရေးအားလုံးရဲ့အစမှာ အရာအားလုံးဟာ အမြဲတမ်းလှပပြီး ပြီးပြည့်စုံပါတယ်။ သင်ချစ်နိုင်သော်လည်း ယာယီဖြစ်နိုင်သည်။ ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်၊အရူးအမူးစွဲ'ခံစားချက်တွေ ဘယ်မှာ ရနိုင်မလဲ။ ခြွင်းချက်မရှိသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် နီးစပ်ခြင်း၊ ခံစားချက်တွေက အရမ်းပြင်းထန်တာကြောင့်ပါ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျဆင်း၏လုပ်ရပ် လမှနှစ်အထိ ကြာရှည်နိုင်သည်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ မြင်တာထက် ပိုကောင်းတာ ဘာမှမရှိပါဘူး။ တခြားလူကို ရွေးချယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရင် သူတို့ရဲ့ ချို့ယွင်းချက်တွေနဲ့ အကျင့်သီလတွေ အားလုံးကို လက်ခံရမယ်လို့ တွေးရမယ်။
လူများစွာသည် ၎င်းတို့၏ တွန်းအားများနှင့် ချစ်ခြင်းမေတ္တာများဖြင့် သယ်ဆောင်သွားကြသည်။ ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်နေသော အချက်ဖြစ်သည်။. အဲဒီလူအတွက် သင်ခံစားရတဲ့ ခံစားချက်က ခဏလေးနဲ့ တစ်ကြိမ်လုပ်ရင် ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ နောက်ထပ်အကြိမ်များစွာ ထပ်လုပ်ပါမည်။ ပေါင်းစည်းထားသောဆက်ဆံရေးတစ်ခုတွင် ကန့်သတ်ချက်များများစွာဖြင့် ရောက်ရှိလာပြီး ၎င်းတို့နှစ်ဦးကြားတွင် ချို့ယွင်းချက်များအားလုံး၏ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး တိုးတက်မှုအတွက် ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးရမည့်အရာမှာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် လက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတိုင်လ်အမျိုးသားများ » fit » စုံတွဲနှင့်လိင် » အိမ်ထောင်ရှင်ယောက်ျားက တခြားမိန်းမကို ချစ်မိတဲ့အခါ ဘာလုပ်မလဲ။